MAXAA KU QARSOON DASTUURKA CUSUB | Anti-Tribalism
← Qaraarka Qarammada Midoobay ee ka horjeeda Somaliland. Waa in the interest of peace and unity in Somalia
MAXAA KU QARSOON DASTUURKA CUSUB
In ka badan labo sanadood ayaa guddi ay dusha ka maamusho hay’adda UNDP waxay gacanta ku hayaan dastuur la rabo in Soomaaliya lagu dhaqo marka uu dhamaado waqtiga KMG ah ee hadda ka baxday. Dastuurkaasi oo ka kooban 69 bog ayaa xubno guddiga diyaarinaya ka mid ahi Shbakada u sheegeen in diyaarintiisu ku baxday in ka badan $25 milyan (labaatan iyo shan milyan oo doolar), lacagtaasoo aan weligeed xitaa la gelin the adeegyada aas aasiga ah ee u baahan yihiin dadka Soomaaliyeed.
– Dastuurkii 1960: Qodobka 1aad (faqrada 3aad) waxaa ku qoran: “Diinta Islaamka ayaa noqoneysa diinta qura ee dalka”.
– Dastuurkii 2000 ee Carta: Qodobka 2aad (faqrada 2aad) waxaa ku qoran; “Islaamku waa diinta Qaranka, dalkana laguma faafin karo diin kale iyo afkaar kale oo ka soo horjeeda diinta Islaamka” (Halkan waxaa lagu adkeeyey in diin kale oo aan Islaam ahayn dalka la keeni karin).
– Dastuurkii 2004 ee Dawlada KMG ah: Qodobka 8aad (faqrada 1aad) waxaa ku qoran; “Islaamka ayaa ah diinta Jamhuuriyadda Soomaaliya”.
– Dastuurkii 1960- Qodobka 71aad (Faqrada 1aad) waxaa ku qoran; “Muwaadin kasta oo Muslim ah, aabihii iyo hooyadiina ay labaduba yihiin muwaadiniin asal ah oo xaq u leh inuu cod dhiibto/bixiyo, da’diisa aysan ka yareyn afartan iyo shan jir, wuxuu mudnaan u yeelanayaa inuu noqdo madaxweynaha Jamhuuriyadda. Qof lama dooran karo in ka badan laba xilli doorasho oo isku xiga”.
– Dastuurkii 2000 ee Carta- Qodobka 23aad (faqrada 1aad) waxaa ku qoran; “Waa inuu yahay Muslim ku dhaqma diinta, labadiisa waalid yihiin Soomaali dhalad ah; horena uusan u guursan haddana qabin oori ajnabi ah”.
– Dastuurkii 2004 ee DKMG ah- Qodobka 40aad (Faqrada C) waxaa ku qoran; “Inuu/inay yahay/tahayMuslim kuna dhaqma/dhaqanta waalidiintiisuna/ waalidiinteeduna yihiin muwaadin Soomaaliyeed”.
Faahfaahin: Wariye ka tirsan Shabakada Moment Media Group oo dhowaan booqday xarunta laga bixiyo dhalashooyinka ee Muqdisho ayaa la kulmay dhacdooyin yaab leh ka dib markii ay soo baxday in baasaboorka cusub ee Soomaaliga la siiyey dad ajnabi ah oo qaarkood hal toddobaad kaliya Muqdisho joogay. Tani waxay u muuqan kartaa in dastuurka Qabyo Qoraalka uu saacidayo!.
– Halka ka akhri Dastuurka Qabyo Qoraalka oo dhameystiran (Ama booqo webka guddiga qoraya dastuurka oo ah www.dastuur.org)
– Dastuurkii Soomaaliya 1960-kii
– Axdigii KMG ee Carta 2000
– Axdigii KMG 2004 ee DKMG ah